Wufuuda ka socota Imaaraadka iyo Israa’iil oo gaaray Washington si ay u saxiixaan heshiiska ay dhawaan wada galeen. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wufuuda ka socota Imaaraadka iyo Israa’iil oo gaaray Washington si ay u saxiixaan heshiiska ay dhawaan wada galeen.
Wufuudda ka kala soctay Israa’iil iyo Imaaraadka ayaa gaaray caasimada Maraykanka ee Washington, si ay u meelmariyaan heshiiski ay dhawaan wada gareen, xafladda saxiixa heshiiska ayaa dhici doonta maalinta Talaadada ah ee soo socota sida la qorsheeyay.
Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa horay u sheegay in heshiiskan ay la saxiixanayaan Imaaraadka iyo Baxreyn uu ka dhci doona Washington, dhankoodana ay kaga bixidoonto dhaqaala badanay.
Hadalkan waxuu ka dhawaajiyay Netanyahu ka hor inta uusan fuulin diyaaraddii ka qadeeysay Telabiib kuna sii jeeday Washington, si uu uga qaybgalo xafladda saxiixa heshiiskii ay kal hore la galeen Imaaraadka iyo Baxreyn, ee uu garwadeen ka ahaa Mareykanka.
Wakaaladda wararka Imaraadka ee (WAM) ayaa sheegtay in Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Imaraadka Abdullah bin Zaayid Al Nahyan, uu gaaray caasimadda Mareykanka isaga oo horkacaya wafdi rasmi ah oo ay ku jiraan saraakiil sarsare, si ay uga qeybqaataan saxiixa heshiiska diblomaasiyadeed ee lala galay Israa’iil.
Wakaaladda ayaa ku warantay in wafdiga ay ka mid yihiin Wasiirka Dhaqaalaha iyo Warshadaha, Safiirka Imaaraadka u fadhiya Mareykanka iyo kan Qaramada Midoobay u fadhiya.
Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Dibada Hungary, ayaa la xaqiijiyay in uu noqon doono wasiirka kaliya ee wasiirada arimaha dibada wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub ee kaqeyb galaya xaflada saxiixa heshiiskan udhaxeeya Imaaraadka, Baxreyn iyo Israa’iil.
Afhayeen u hadlay Wasiirka Arimaha Dibada Hungary Peter Zegarto ayaa wakaaladda wararka Hungary ee (MTI in) u sheegay in wasiirka uu casuumaad ka helay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, si uu ugu qeyb galo xaflada saxiixa heshiiska ee lagu qaban doono Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka.
Wadamo ay ka mid yahiin faransiiska iyo ingiriiska ayaa soo dhaweyay heshiiskan, sidoo kale gudiga fulinta ee midowga Yurub oo soo dhaweeyay heshiiskan ayaa sheegay in dhaqangalka heshiiskan uu muhiim u yahay xasiloonida gobolka.
Dhanka kale, Ururka Culimada Muslimiinta ayaa cambaareeyay heshiiska dhexmaray Baxreyn iyo Imaaraadka iyo Israa’iil.
Xoghayaha Guud ee Xiriirka Culimada Islaamka Dr. Cali Al-Qaradaaci ayaa carrabka ku adkeeyay in aarinkan uu daba socda qabsashada Qudus ee ay ka aamuseen Muslimiinta Caalamka, iyo in waddamad Carabta ay dhagaha ka fureysteen dulaanka Har iyo Habeen lagu haayo Shacabka Falastiin.
Hadaladan ayaa yimid kadib markii Baxrayn ay ku dhawaaqday Jimcihii inay xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa ay la yeelaneeyso Israa’iil, si ay ula mid noqoto Imaaraadka Carabta oo hore tallaabo tan la mid ugu dhawaaqay 13-kii bishii August ee sanadkan.
Wufuuda ka socota Imaaraadka iyo Israa’iil oo gaaray Washington si ay u saxiixaan heshiiska ay dhawaan wada galeen. was last modified: September 14th, 2020 by Admin
Wasiir Goodax oo maanta hor-tegay kulanka golaha shacabka
Akhriso:-Taliyihii hay’adda Nabad-sugida Qaranka oo xilka iska casilay
Dhageyso:-Xulafada Sacuudiga oo muddo 48-saac u kordhiyay Qatar inay ku aqbasho dalabkooda
Galmudug oo Al-Shabaab ku eedeeysay dagaal beeleedyadda Mudug